AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်အံက်သာ (ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ / AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်အံက်သာ (ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ September 4, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 227 Views
ရေးသားသူ: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ > မင်းသုတ
AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်အံက်သာ(Facebook)
မင်းသုတ – မေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ- အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျှင် ၂၀၁၀ တချို့ကိုယ်စားလှယ်များကို အားမရလို့ပါ ကျွန်တော်တို့မွန်
လူမျိုးများရဲ့ လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ ဒါတွေကိုအတိအလင်းပြောချင်တယ် နောက်တခုက ကျွန်တော်တို့ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်တွေက အခြေခံလူတန်းစားတွေပါ အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုကျော်ပြီး အဝေးကိုသွားကြည့်နေလို့မရဘူး ဒေသခံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မျှော်လင့်ချက်တွေကို သိတဲ့ခံစားဘူးတဲ့ ကျွန်တော်တို့လိုအခြေခံလူတန်းစားစင်စစ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက် လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
ဖြေ- မွန်လူမျိုးနဲ့မွန်ပြည်နယ်သားတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးတွေလို ဘဝတူတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအတွက် ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ ရရှိနိုင်တဲ့ အထောက်အကူကို်ယ်စားလှယ်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ –
မေး-တကယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရပြီးဆိုပါက မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား?
ဖြေ- ဥပဒေအရ အထိုက်လျောက်တော့ ဖော်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်`f လက်ရှိဥပဒေအရ အပြည့်အဝဖော်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပေမဲ့လည်း မွန်လူမျိုးများနဲ့မွန်ပြည်သူများတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးသိရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပါ။
မေး-အခု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်မြင်ပါသလဲ?
ဖြေ- ကျွန်တော်တို့နယ်မြေမှာ ပြီးပြည့်စုံတာဘာမှမတွေ့ရတော့ အစစအရာရာလိုအပ်နေဆဲလို့မြင်တယ်။
မေး-ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါက ဘယ်ကိစ္စရပ်ကို ပထမဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ပေး သွား မယ်ဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားထားပါသလဲ ခင်ဗျာ?
ဖြေ- မွန်အမျိုးသားရေးအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအရေးကို အဓိကထားပြီး စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူများလိုအပ်ချက်တွေထဲက အရင်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ဟာကို အရင်လုပ်သွားရမှာပါ၊ လုပ်စရာကအများကြီးပါ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာလည်း ပြည်သူတွေအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်၊ ဥပဒေကတရားတာရှိသလို မတရားတာလည်းရှိတယ်၊ ယခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကတော့ ပြည်သူတွေဥပဒေအပေါ် သိပ်နားမလည်ကြတာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး မတရားလုပ်ခဲ့တာကိုဘဲခံနေရတယ်၊ ဒါဟာအဓိကပြစ်မှတ်တစ်ခုဘဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်းကြတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ မဟာဓာတ်အားလိုင်းကလျှပ်စစ်မီးရရှိဖို့ ဦးစားပေး ကြိုးစားရမှာပါ။
မေး-နောက်တစ်ခုက မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထဲက ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင် ဆောင် ရွက်ပေး သွားဖို့ရှိပါသလဲ?
ဖြေ- လိုအပ်ချက်အများထဲက တစ်ခုကိုရွေးပြီးပြောရမည်ဆိုရင် မွန်စာပေနှင့်မွန်စကား ရုံးသုံးစာ/ဘာသာစကား အသိမှတ်ပြုပေးဖို့ ဥပဒေတစ်ရပ်အနေနဲ့ပြဌာန်းပေးဖို့ပါ ကျန်တာအများကြီးပေါ့ဗျာ။ –
မေး-မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကော ဘာတွေ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါသလဲ။ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မီဒီယာကနေ ဘာများမှာကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ- မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ လိုအပ်တာမှန်သမျှ လုပ်ခွင့်ရတဲ့အရာအားလုံးကိုလုပ်ရပါ့မယ် လုပ်လို့မရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြောဆိုတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဘဲ၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုမှာကြားချင်တာက နံရိုးသည်ကျောရိုးထက် မြတ်ရိုးထုံစံမရှိ အသည်းကြားကမဲတစ်ပြားဟာ အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ သင့်အတွက်သင့်လူမျိုးအတွက် လှပသာယာသောအနာဂတ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ ဒဒိုက်ဘဝညးဘုံသဿဝ် ညးစှးနူဘုံသဿဝ်ဟေင် ဗွဲတေဿင်တီကေတ်မာန် ဂ္စာန်တဲုဟံင်ပြာ် သာ်ဝွံရန်တဿံအဲ
အမည်- နာဲအံက်သာ(အောင်ဘ)Oak Sar
အလုပ်အကိုင် -ဗွီဒီယိုပြသ၊ ခွေငှား၊ လက်ရှိ-ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး
ပညာအရည်အချင်း-အဋ္ဌမတန်း၊ပရိယတ္တိပဌမအငယ်တန်း၊ Peace Building Program(Thailand) မွေးသက္ကရာဇ် -26/12/1965
လက်ရှိ နေရပ်လိပ်စာ -သောင်ပြင်ကျေးရွာ၊ရေးမြို့နယ်
အဖအမည်- နိုင်ဖိုး ယှဉ်ပြိုင်မည့်
မဲဆန္ဒနယ် – ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း၊
ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် -အမျိုးသားလွှတ်တော်(၇)- မွန်ပြည်နယ်
NMSP မွန်ပြည်သစ်ပါတီတွင်သုံးလသာဝင်ရောက်လာကာ ငှက်ဖျားတစ်နှစ်ကျော်ဖြစ်ခါရပ်နားခဲ့ရ။ ဂီတရာမာဉ် အဖွဲ့တွင် တေးသီချင်း (၃)ခွေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့။ (2008-2010)ထိ လမိုင်းမြို့နယ်မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့။ (63)ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့(ဗဟို) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၃)တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့။ (2009-ယနေ့ထိ)ရေးမြို့နယ် မွန်ကလောင်ရှင်များအသင်းတွဲဘက်အတွင်းရေမှူး။ (2008-2010)ထိ ထားဝယ်ခရိုင်မွန်လူငယ်ခေါင်းဆောင်။ (2009-2010)ထိ MYF အစည်းအရုံးဖြစ်မြောက်ရေးခေါင်းဆောင်(ထားဝယ်ခရိုင်ကိုယ်စားပြု)။ (2009)ရာမညပြည် အခြေခံဥပဒေပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံ NMSP ဗဟိုဌာနချုပ်(မွန်လူငယ်များကိုယ်စားတက်ရောက်)။n (2009-10) MAU ဗဟိုကော်မတီဝင်။ (2013)မွန်အမျိုးသားကွန်ဖရင့် ကျင်းပရေးကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး။ (2010)AMDP ပါတီတည်လိုသူအဖွဲ့ဝင်။ (2010-ယနေ့ထိ) AMDP ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်။ မွန်ဂျာနယ်များတွင် အံက်သာ(တံင်ပရင်) ကလောင်အမည်ဖြင့် ယနေ့ထိ ဆောင်းပါများရေးသားလျက်ရှိသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ မင်းသုတ 2015-09-04
Tags ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ မင်းသုတ
Previous ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း-ရေး(၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း MNP ပါတီ
Next MNP မုဒုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မိလေးမွန် (အင်တာဗျူး)